प्रवासबाट एक युवाको गुनासो : यस कारण नेकपाको सरकार असफल ! | Matrisandesh
प्रवासबाट एक युवाको गुनासो : यस कारण नेकपाको सरकार असफल !
@बसन्त पौडेल,जापान ।
-राजनीतिमा चासो राख्नै पर्दैन । देशको ख्याल गरे पुग्छ । बाहिरियो सिके राउतको यस्तो घिनलाग्दो बेवार ब्यवहार देशलाई सिक्किमिकरण गर्ने खुलासा केपि र प्रचण्डले देश डुबाउनै लागेका हुन त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उपस्थितिमा सरकार र सीके राउतबीच सहमति भएलगत्तै सत्ता पक्षकै नेता भीम रावलले सहमति राष्ट्रघाती भएको प्रतिक्रिया दिए । पार्टीको सिन्डिकेट तोडेर यो अभिव्यक्ति दिन रावलले देखाएको आँटलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । रावलको बोलीमा निहित उद्देस्य के छ थाहा छैन तर उनको प्रतिक्रिया यो सहमतिको भविष्यमा आउन सक्ने विम्ब हो ।
सीके राउतको नियतकै कारक हो । ओलीको अर्कण्यमताको परिणाम पनि हो । सम्झौतापछि सीके राउतले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे –‘‘सरकार जनमत संग्रह गर्न राजी भएको छ । यो स्वतन्त्र मधेसको जित हो ।’’ बेलुका राउतका कार्यकर्ताले मधेसका विभिन्न भागमा ‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा दिपावली मनाए । केपी ओलीले देश टुक्य्राउने बीउ रोपेकै हुन् त ? नेपालमा पछिल्लो पटक सीके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन चलाए । अमेरिकामा पढेर नासाको इन्जिनियरको जागिर छोडेर उनी ८ वर्षअघि एकाएक नेपाल आएर स्वतन्त्र मधेसको अभियान सुरु गरे ।
उनको पृष्ठभूमि न राजनीतिक थियो न कुनै सामाजिक अभियानमा जोडिएका थिए । उनको एकाएक आगमन पिछडिएको मधेसी समुदायको सहानुभूति बटुल्न सफल हुन थाल्यो । यसबीचमा सरकार कति निरीह भयो भन्ने सम्झिँदा पनि लाज लागेर आउँछ । सीके राउतलाई चर्चामा ल्याउन सरकारले पक्राउको नाटक मञ्चन गरेर मधेसमा हिरो बनाइदियो । पछिल्लो पटक राज्य विप्लव (देशद्रोह) को मुद्दामा उनी जेल त पुगे तर केपी ओली सरकारको निगाहमा आफ्नो अभियानमा झन् अग्लिएर जेल मुक्त भए ।
यहाँ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको फैसलाजस्तो लागेन । नियोजित सरकारको खेलको भान भयो । सीके राउत यस खेलमा सफल भए । सीके–केपी सम्झौतापछि अहिले मधेसमा उनी निकटका व्यक्तिहरू धमाधम विजयको मुखमा पुगेको सगर्व बताइरहेका छन् ।
मुलुक बिग्रनुमा मुख्य तीन कारण हुन्छन् – १ खराब दल, २खराब नेता र ३ खराब कार्यकर्ता
आख़िर सीके राउत यस खेलमा सफल भए वा सीके–केपी सम्झौतापछि अहिले मधेसमा सीके निकटका व्यक्तिहरूले संसार जीते गरी विजयी नमनाए हुने हाम्रो पुर्खाहरूले सिर्जेको नेपाल चाहे सिके चाहि केपी प्रचण्डले चाहेर छुट्टीने र टुक्राउने कदापि गर्न सक्दैनना आम जनताले त्यसलाई लत्याएर सुन्दर शान्त नेपाल सदा झलमला गरी राख्ने छन । धन्यवाद ।
लेखक : पाल्पा समाज जापानका सल्लाकार
जापानवाट महेश श्रेष्ठले एनआरएनए कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने